Maxay yihiin ciidamada Danab? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — October 17, 2020
Ciidamada Danab ayaa la asaasey sanadkii 2013, tan iyo markaas waxaa soo marey taliyaal gaaraya 8 taliye.
Danab waa kumaandooskii ugu horraysay ee Soomaaliya ay yeelato tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka, sannadkii 1991. Dowladda Mareykanka ayaa bishii Oktoobar ee sannadkii 2013-kii bilowday tababarka ciidamada Danab, waxaana xilligaas lagu bilaabay hurin 105 askari ahayd.
Sida saraakiil dowladda ah laga soo xigtay ay sheegeen, ujeeddada loo sameeyay ciidanka ee xilligaas waxay ahayd in la hirgeliyo ciidan isku dhafan oo kumaandoos ah, waxaana lagu aasaasay saldhigga ciidamada cirka ee Belidogle ee degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Kumaandooska Danab waxaa saldhigga Balidogle ku tababara ciidamada Mareykanka ee ku sugan goobtaas, kana tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika.
Sidoo kale saraakiisha kumandoosta Danab, gaar ahaan kuwa hoggaamiya dagaalka ayaa lagu soo tababaraa dalal dibadda ah oo Mareykanka uu ka mid yahay, halkaas oo ay ku soo qaataan tababarro dheeraad ah oo la xiriira hoggaaminta ciidanka xilliyada dagaalka.
Tags: Maxay yihiin ciidamada Danab?
Next post Waa dhowr iyo toban jir inta mar ee la guursaday tiro malahan
Previous post Ninkii uu dilkiisa sababay isku dhicii Spain iyo Mexico